သရော်စာ Archives - Page3of6- News @ M-Media
မပုတု၏ Service အသစ် ( သရော်စာ )
စက်တင်ဘာ၊ ၁၃ ၊ M-Media ရေးသူ- အောင်ဝင်းထွဋ် ကျမတို့ မပုတု အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုမှ 2013 – Sea Game အမှီ 0/bps ဆားဗစ်ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးတာတော့မည်…….. ရှဉ့် ရရှိမည့် အကျိ်ုးကျေးဇူးများမှာ[Read More…]
September 13, 2013 — သရော်စာ
ကျွန်တော့် ​အိပ်မက်နှင့် ပုဒ်မ ၁၈
သြဂုတ်လ-၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၃ ရေးသူ- ကနေဒါမှမေခလာ ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ကို ရဲစခန်းက ထုတ်လာသည်။ အပြင်မှာလူစုံတက်စုံတွေ့ရသည်။မောင်နှမသားချင်းဆွေမျိုးများရော သူငယ်ချင်းများပါ လာကြိုကြသည်။ သူတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာ စိတ်လည်းမကောင်း ကိုယ့်ကိစ္စကြောင့် လူတော်တော်များများ အလုပ်ရှုပ်သွားသည်ကို အားနာမိပါသည်။ အမေ့မျက်နှာမှာလည်း မျက်ရည်များစွာနဲ့[Read More…]
August 27, 2013 — သရော်စာ
2013 မြန်မာပြည် ခရီးသွား လမ်းညွှန်
ဇူလိုင်-၂၄၊ ၂၀၁၃ ရေးသူ- ဇော်မင်းထွေး ၁. ယမ်းငွေ့ ဝေေ၀ ၊ မနောမြေ.. ဒုက္ခသည် စခန်း စိတ်ပင်ပန်း စရာ နှလုံးကွဲအက် အလည်အပတ် ခရီးစဉ် ၂. သူသေ ကိုယ်သေ သတ်လို့မ၀၊[Read More…]
July 24, 2013 — သရော်စာ
ဇွန်-၇၊၂၀၁၃ ရေးသူ-Paw Lwin ပုဂံမှာ ဗလီဆောက်မည်ဆိုသည့်အကြောင်း အခုတစ်လော တစ်သောသောညံနေသည် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ တင်ပြသောသတင်းဖြစ်ပါသည် ဗိုလ်ခင်ညွန့်ထံ ထောက်လှန်းရေး သင်တန်းတွေဘာတွေ တက်ဖူးသည် ထင်ပါ့ သတင်းက အတိအကျ ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ယုံလောက်အောင် တင်ပြထားသည် ကာယကံရှင်[Read More…]
June 7, 2013 — သရော်စာ
မတ်လ ၁၀ ၊ ၂၀၁၃ M-Media သစ်ဆန်းခန့် ခုတလော မောင်သစ်တို့ ရဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် မယောင်ရာဆီလူး တဲ့ ဖြစ်ကတက်ဆန်း ဖွဲ့စည်းပြီး မည်သူမှ အသိမှတ်မပြုသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘွဲ့တံဆိပ် အပ်နှင်းထားတဲ့[Read More…]
March 10, 2013 — သရော်စာ